सयौं कार्यकर्ता सहित कांंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गरे पुल उद्घाटन ! – साँचो खबर
सयौं कार्यकर्ता सहित कांंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गरे पुल उद्घाटन !
काठमाडौं : बुधवार प्रहरी ह’स्तक्षेपका कारण रोकिएको तनहुको बुल्दीखोला पुल उदघाटन नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आज उदघाटन गरेका छन् । पुल उदघाटनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता कार्य कर्ता जु’लुस सहित पुल उदघाटन स्थलमा पुगेका थिए । जिल्लाभरका कांग्रेस नेता कार्यकर्ता दमौलीमा उत्रिएका छन् ।
बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुल क्षेत्रमा निषे’धाज्ञा जारी गरी पौडेल लाई पुल उद्घाटन गर्न नजान आग्रह गरेको थियो । तर पौडेल पुल उद्घाटन गर्न जाँदा नि’यन्त्रणमा लिई ३ घण्टापछि छाडेको थियो । तर बिहीबार भने उक्त पुल उद्घाटनमा प्रशासनले अवरोध गरेन । बिहीबार कांग्रेसका कार्यकर्ताले बुधबार प्रहरीले गरेको व्यवहारको विरोधमा नाराबाजी समेत गरेका थिए ।
उक्त गि’रफ्तारीको चौतर्फी बिरोध भएको थियो । दमौलीमा आज कांग्रेस कार्यकर्ताहरु प्र’र्दशन गर्दै पुल उद्घाटन समाारोह पुगेका थिए । बुधवार प्रशासनले अ’बरोध गरेपछि हुन नसकेको तनहुँ ब्यास नगरपालिकामा रहेको बुल्दी खोलाको पुल आज कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गरेका छन् ।
Previous: केपी ओली सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारको सर्वोच्च अदालतमा रिट
Next: कोरोनाकाे भ्याक्सिन अपराधीहरुले दुरुपयोग गर्न सक्ने इन्टरपोलको चेतावनी